फागुन २३ गतेदेखि अर्को चरणको खोप अभियान सुरु हुँदै , ६५ वर्षभन्दा माथिकालाई मात्र दिइने – Saurahaonline.com
काठमाडौं : फागुन २३ गतेदेखि अर्को चरणको खोप अभियान सुरु हुँदै छ । उक्त दिनबाट ५५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई खोप दिइने भनिएको थियो । तर, अहिले आएर उक्त प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फागुन २३ गतेदेखि सुरु हुने खोप अभियानमा ६५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई खोप दिइने जानकारी दिएको छ ।
उक्त उमेर समूहलाई खोप दिइसकिएपछि ५५ वर्षभन्दा माथि उमेरकालाई खोप दिइने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले जानकारी दिए । खोपको अपर्याप्तता र दुवै उमेर समूहका व्यक्तिहरु एउटै लाइनमा राख्दा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । आज मन्त्रालयले आयोजना गरेको सञ्‍चारकर्मीहरुका लागि कोभिड-१९ खोपको विज्ञान र नेपालमा खोप अभियान विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले अहिले खोप प्राथमिकतामा केही परिवर्तन गरिएको बताए ।
“हामीले सबैलाई लगाउने हो। ५५ वर्षको र ६५ वर्षको उमेरका व्यक्तिलाई एउटै लाइनमा राख्दा त्यसले थप जोखिम निम्तिन सक्छ । अर्को कुरा सीमित स्रोत साधनले गर्दा पनि हामीले दोस्रो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा ६५ वर्षभन्दा माथिकालाई लगाउँछौं,” डा. अधिकारीले भने ।